Japan iji belata mmachi mgbochi maka ndị njem ọgwụ mgbochi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Japan » Japan iji belata mmachi mgbochi maka ndị njem ọgwụ mgbochi
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Naanị asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na Pfizer na BioNTech, Moderna na AstraZeneca ka a ga -anabata n'aka ndị mbịarambịa.
Japan nabatara asambodo ịgba ọgwụ mgbochi US, EU na Japanese site n'aka ndị ọbịa.
Gọọmentị Japan na-atụlekwa ibelata mgbochi COVID-19 ụlọ.
Ụfọdụ ndị ọkachamara ahụike dọrọ aka ná ntị banyere ihe ize ndụ nke ibuli ihe mgbochi n'oge.
Ndị ọchịchị gọọmentị Japan kwupụtara na ha bu n'obi zuo ike ịpụ iche iche COVID-19 maka ndị na-abata n'obodo nwere asambodo na-akwado ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke megide coronavirus na mbido Septemba afọ a.
Dabere na akụkọ mbụ, a ga -ebelata oge ịpụ iche mgbe ọ gafesịrị ókèala Japan site na izu abụọ ruo ụbọchị iri.
Naanị asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na Pfizer na BioNTech, Moderna na AstraZeneca ga -anabata ndị mbata si mba ọzọ.
A ga -enyerịrị asambodo ịgba ọgwụ mgbochi na USA, mba EU ma ọ bụ Japan, ka a nabata ya.
Tupu mgbe ahụ, Ministri Ahụike Japan kwụsịtụrụ iji ihe dị ka nde 1.63 ọgwụ Ogwu ogwu Moderna site n'ụdị atọ emere na Spain. Achọpụtara ihe amaghị ama na nkwadebe.
A na-atụkwa anya na gọọmentị ga-ekpebi ịgbatị ọnọdụ mberede COVID-19 dị ugbu a karịa ụbọchị ngwụcha Sọnde ruo Septemba 30 maka Tokyo na mpaghara iri na asatọ ndị ọzọ, ebe ụlọ ọgwụ ka na-enwe nsogbu, isi mmalite ndị ọchịchị kwuru.
Ugbu a, a gwala ndị mmadụ ka ha ghara ime njem gafee oke mpaghara, mana ụdị njem a ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ndị mmadụ emechala usoro ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ nwee ike igosi ihe akaebe nke ule COVID-19 na-adịghị mma, isi mmalite ndị maara atụmatụ ahụ kwuru.
Gọọmentị na-emekwa atụmatụ ibelata oke ndị na-ekiri ihe nkiri 5,000 ugbu a na nnukwu ihe omume ma ọ bụrụ na emezuru otu ọnọdụ.
A ga-ahapụ ụlọ ebe a na-eri nri nke na-agbaso usoro mgbochi nje kwesịrị inye mmanya, ebe otu buru ibu karịa mmadụ anọ nwere ike irikọ nri.
Expertsfọdụ ndị ọkachamara ahụike ekwupụtala nchegbu na ọ ka akabeghị aka inye ndị mmadụ ohere ịlaghachi na ndụ ha dịka Japan enwebeghị mgbasa nke nje a.
Prime Minista Yoshihide Suga kwuru, "Anyị na -elezi anya nke ọma na usoro ahụike ugbu a wee mee mkpebi".